Iphrojekthi yendlu ye-Wright-isitayela
Uzoqala ukwakha indlu, kodwa ungazi ukuthi ufuna ukubona kanjani ikhaya lakho elizayo? Isitayela sikaWright singaba yisisombululo esihle kakhulu kulabo ababazisa ubuhle nokududuzeka ngokulinganayo.
Kusukela emlandweni wokwakha
Igama layo lamukelwa ngokuhlonipha umsunguli wayo - isakhiwo saseMelika uFrank Lloyd Wright. Kucatshangwa ngokufanele umdali we okuthiwa "ukwakheka okuphilayo." Njengesibonelo esaziwa kakhulu, ungaletha uRobie House, enezibonakaliso zalesi sitayela: ukuhleleka okuvulekile, ukuma okujwayelekile okujwayelekile, ama-parapet amakhulu, amawindi amakhulu.
Ngakho-ke kufanele kube yiphi indlu yesitayela samanje? Okokuqala, i-squat ne-angular: izakhiwo ezinjalo zibonakala ziqhubeka ngokuqhubekayo komhlaba lapho zimi khona. Okwesibili, uhlukanisiwe. Izakhiwo ezidalwe ngaphakathi kwalesi siqondisi zihlukaniswe ngezigaba eziningana ezithintekayo ngokusebenzisa imigqa engezansi yephahla eliphakeme lendwangu. Okwesithathu, indlu ngesitayela sikaWright, indaba eyodwa noma indatshana ezimbili, ihluke njalo eclecticism. Lokhu kubonakala, okokuqala, ekugcineni: ukhonkolo, ingilazi kanye nezinye izinto ezijwayelekile "zedolobha" izinto ezihlanganiswayo ngokubambisana nezinkuni zemvelo, itshe elibi kanye nezinye izinto "zemvelo". Ama-facades awahlotshisiwe. Ekugcineni, ikhadi elivakashelwayo lezakhiwo zesitayela se-Wright kuthathwa njengamafasitela amakhulu e-panoramic, okuvumela ukugcwalisa amakamelo angaphakathi ngelanga.
Isitayela seRaine ekwakhiweni kwezindlu zezwe sithandwa kakhulu. Lokhu kuchazwa ngokumane nje: i-cottage eklanyelwe futhi yakhiwe ngokuvumelana nemigodi yayo, iyoba ukunambithelela cishe wonke umuntu: umculi wezenzo kanye nokwaziswa kwezinto zanamuhla , i-esthete nomshicileli "wemvelo" kukho konke ukubonakala kwayo.
I-Glass Glass ekhishiwe
Ifenisha ye-Wicker ezweni
Indlela yokuvuselela i-armchair endala ngezandla zakho?
I-Gazebo enezindawo zomlilo
Ukufakwa kwe-Window sill
I-Mirror iphaneli ngaphakathi
Imigwaqo eyenziwe ngamapulangwe
Ungakwenza kanjani ikhishi ngokwakho?
Ikhishi endlini yezwe - imibono engcono yokuklama
Odokotela Art Deco
Igumbi lokulala endlini yesitayela se-minimalism - izimfihlo zomklamo oqondile
U-Irina Sheik weza kule podium okokuqala ngemuva kokuzalwa kwendodakazi yakhe
Ama-antibiotics we-laryngitis ezinganeni
Uhlelo lwe-BT ngesikhathi sokukhulelwa - izibonelo
Zucchini othosiwe ku-batter
Kanjani ngokushesha ukuhlanza indlu?
Indlela yokusheshisa ukuvuthwa kwepelepele ku-abamba ukushisa?
Iresiphi yesobho se-beetroot esishisayo nenyama
I-Potato casserole nge ushizi
I-apoplexy ye-ovary - izimpawu
Flower of cineraria - izimpawu ezikhethekile zokukhula ekhaya
Ukukhulumisana kuka Natalia Vodyanova mayelana nokukhulelwa kokugcina
Izimpawu zokuncintisana kosana
I-snowman evela kumamojula
Inyosi ebilisiwe ebomvu ekhaya
Ungafunda kanjani ukuqhuba amamitha angu-100 ngokushesha?
Imikhiqizo emihle eyenza ukunciphisa ukudla
Ukwakhiwa kwempikili emhlophe - izinhlobo ezingu-28 ze-manicure ezimhlophe ezimfashini
U-Roller uyimpumputhe ngokunyathelisa isithombe
Iminqumo emihle - okuhle nokubi